Iwe Unofanirwa Kuziva Nezve Mawiricheya | Karman® Mawiricheya
chii yakakosha kuziva nezvazvo mavhiripu? Gore rega rega mumaParalympics, vazhinji vedu tinosvika pakupupura pamwe nekusangana nemitambo inoshamisa yemitambo mukati memavhiki anotevera. Iko nekuda kwezviitiko zvakadaro izvo, kune imwe nhanho, kuva remara ikozvino yaonekwa zvakajairika nevazhinji vedu. Asi, pachine nhema chinotyisa pamwe nezvimwe zvirevo maererano kuremara, uye ichi chimwe chinhu chiri kunetsa pamwe nekusakosha. Saka kuitira kuunza kujekesa nekuziva zvakanyanya maererano mawiricheya emagetsi, tinoda kunyora zvinhu zvina zvinonakidza pamusoro pazvo mawiricheya emagetsi kuti iwe uzive.
kuziva nezve mavhiripu
1. Mawiricheya Chaizvoizvo Hapana Chaunofanira Kutya nazvo
Ngatitangei nekugadzira zvakakosha kubvuma nezve mavhiripu kuti isu sevanhu, tinofanirwa kumira kutya zvakadaro kuremara. Kuremara hapana chinhu chekufunganya kana kutya! Kunyanya muUnited Kingdom, vanhu vanoita kunge vanochenjerera uye vane hanya nekuita kana kutaura chinhu chakanaka. Ivo vanotya kurira kurira patronizing kana kugumbura izvo zvavanopedzisira vasisataudzane nazvo remara vanhu, kunyanya avo vari mu wiricheya. Nehurombo, izvi zvese zviri nekuda kwekutya kwekukanganisa icho uye nekushaikwa kwekubvuma! Izvi hazvisi zvekusuruvara chete, asi zvinowedzerawo 'kutya chinhu' pane kuibvisa. Yenzanga iri zvachose kufambidzana uye takasanganisira, tinofanira kurega kuita zvinonetsa zvakanyanya takapoteredza vanhu vakaremara.
2. Magetsi Mawiricheya Unogona Kuva Unofara uye Unogadzira
Tranzit GO! Wiricheya Yemagetsi 15 mamaira pamutero
Chimwe chezvinhu zvinonakidza nezve mavhiripu ndeyekuti iwe unogona kuve wiricheya yemagetsi mushandisi uye panguva imwechete iwe unogona zvakare kutarisa fashoni uye inokwezva. Hapana chinogona kumisa a wiricheya mushandisi kubva pakuve remara zvakare inokwezva, kunyanya kana izvo zviviri zvisingawirirane.
Kunzwisisa izvi kunogona kuchinja maonero anoita vanhu yangu kuremara uye mavhiripu. Tinovimba kuti iwe unogona zvakare kuve neruzivo urwu ikozvino. Unogona kuwana yako wiricheya yemagetsi kana kunyange yemumwe wako wiricheya! Iva akashinga uye taura. Funga nezvemavara, glitters, sequins, kana kunongedza yako backrest dhizaini. Izvo zvese zvakanyanya zvinogoneka. Kana kumutsiridza yako wiricheya yemagetsi zvinogona kukuita iwe 'kumira muboka revanhu' uye unzwe kugadzikana nezve yako kuremara uye mashandiro anoita zvinhu zvese pamwe chete, wobva wativimba isu, zvinopfuura kukosha kwazvo.
3. Kuvapo kwe Wiricheya Perks
Hapana munhu anofanira kunzwa achizeza kutaura ne remara munhu zvachose. Pamusoro pekuwana shamwari, hushamwari hwako navo hunogona zvakare kuunza mimwe mikana inoshamisa kwauri. Semuenzaniso, pane nguva apo vanhu vakaremara vanowana kunakirwa kwekusununguka kuhotera kana vachibvuma kuendesa kuongororwa pakuwanika. Vamwe vacho vakagadziriswazve kuBusiness Class, uye shamwari dzavo vanofarirawo matikiti e cinema nehafu mutengo. Nekudaro, zvakazara kwete zvakanyanya kushatisa ndeyekuti ugare pasi.
4. Kusakwana kwePanyama Simba Hazvireve Kushaikwa kwesimba reBongo
ose wiricheya mushandisi ane chirwere chemuviri chakasiyana nezvimwe remara vanhu. Vamwe vanhu vanoshandisa mawiricheya emagetsi semhedzisiro yechiposta chavo chirwere kubva mutsaona yemotokari. Vamwe vanozvarwa vaine muviri ezvinhu iyo inogona kuva cerebral palsy kana kunyange muscular dystrophy. Kune zvekare zviitiko apo vanhu vanozopinda hupenyu hunokura mamiriro akaita akawanda sclerosis. Nekuda kwevamwe mamiriro, panogona kuve nekukanganisa pane a wiricheya mushandisi 'kugona kutaura zvakajeka. Vamwe vanhu vanotenda izvozvo kuva remara inogona kukanganisa zvakananga chikamu chehungwaru kana pane iyo remara kugona kwevanhu kunzwa kana kunzwisisa chero chinhu, saka vanopedzisira vataura ne wiricheya mushandisiShamwari uye kwete iyo wiricheya mushandisi zvakananga senge ivo vasipo kana ipapo. Nepo vamwe vanoshandisa wiricheya unotambura nekushungurudzika kwepfungwa. Nekudaro, hunyanzvi hwavo hwekutaurisa hwekutaura hauratidze hwavo kugona kufunga, uye iwe unofanirwa kutaura kwavari sekutaura kwaungaita kune mumwe munhu.
Mhedziso yaunofanira kuziva nezvayo mavhiripu
Mukuvimbika kwese, kuva ne kuremara ndiko kwete nguva dzose kunakidza. Zvakadaro, zvakare zvakakosha iyo yatinotarisa kune jovial divi re upenyu. Izvo zvinhu zvakaoma izvo vanhu vane hurema vanosangana nazvo. Izvo zviri nyore kuve asina tariro, uye iri nzira yakanyanya kuoma kuve netariro uye kuona yakajeka chikamu chehupenyu.
Ngatitii munhu wese munharaunda medu anga achiziva izvi zvinonakidza zvinhu nezvazvo mavhiripu. Panguva iyoyo, vanhu vacho kushandisa ivo pamwe chete ne kuremara, kazhinji, vaizonzwa kuve vanobatanidzwa pamwe nekugamuchirwa munzanga. Kunze kwezvese izvo, vanhu vakadaro vanonzwa vachizvikudza zvakanyanya pavanoona shanduko dzepfungwa pamwe nemaonero evanhu munharaunda. Nekudaro, izvo zvakare zviri kusvika remara vanhu kukurudzira shanduko iyi munharaunda zvakanaka. Izvi zvinogona kuwanikwa nekuremekedza kutaurirana nevamwe, kunyangwe kana vachishandisa mazwi asiri iwo. Wobva wavaruramisa nemutsa. Kana iwe ukapindura zvine hukasha, unozopedzisira wovabvisa kubva pakambotaura kune a remara munhu zvakare! Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti rukudzo inzira mbiri-nzira. Tine chokwadi chekuti zvishoma nezvishoma uye zvishoma nezvishoma, tichasvika ikoko.
Chinongedzo Kumitambo yeParalympics
10 Kushambadzira Gimmicks Kwakaenda Zvakashata